Chire - ALinks
Ungawana sei Jobho Uye Shanda muChile.
November 30, 2020 Karuna Chandna Chile, mabasa
Muchikamu chekumaodzanyemba kweSouth America, Chile iri pakati pePacific Ocean kumadokero neAndes kumabvazuva. Mutauro weChile unoshanda zviri muchiSpanish. Chinyorwa chemidziyo yekutsvaga mikana yebasa semutorwa mu
Sei Maitiro Ekunyorera Asylum muChile? Ziva pano!
September 15, 2020 Karuna Chandna Chile, vapoteri
Kunze kwenyika & Ministry of Interior inosarudza kutapwa kwevapoteri kuChile. Mukubatana pamwe neUnited Nations High Commissioner Yevapoteri (UNHCR). Ivo zvakare vakaisa chinangwa chegore chekugarisa vanhu patsva. Mhosva dzakasarudzwa dziri pachikumbiro chepepa. Kana zviripo
Maitiro Ekunyorera kweChile visa chikumbiro?
Dai 23, 2020 Antika Kumari Chile, vhiza
Nyorera YeVisa MuChile- Unofanirwa kuziva kuti nechinangwa chipi chaunofanira Kunyorera kuchiratidzo che visa. Unogonazve kuridza runhare panhamba dzinoti 044716270 (# 5) kana email-consrate@embchile.co.nz. Kana hongu, tevera mirairo iri pasi apa. Matanho Ekushandisa